Gudoonka sare ee Baarlamaanka Federaalka oo go'aan kasoo Saaray mooshinka laga Keenay Madaxweynaha. | SAHAN ONLINE
Gudoonka sare ee Baarlamaanka Federaalka oo go’aan kasoo Saaray mooshinka laga Keenay Madaxweynaha.
Gudoonka sare ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta go’aan kasoo saaray mooshinka ay keeneen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka kaasoo xilka looga qaadayo Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud.
Baarlamaanka qoraal kasoo baxay oo ka koobna afar qodob ayaa lagu in maalinimadii arbacada ay mooshin ka dhan ah Madaxweynaha usoo gudbiyeen Baarlamaanka xildhibaano gaarayey 93 mudane.
Waxa uu gudoonku ku sheegay in mooshinkaas loo maareyn doono qaab Dastuurka waafaqsan iyo shuruucda kale ee u degsan dalka balse Gudoonku ma uusan cadeyn xiliga uu ka doodi doono mooshikan buuxiyey shuruudaha markii mooshin la gudbinayo.
Mooshinkan ka dhanka ah Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa si weyn looga dareemay magaaladda Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir iyo hoteelada ay deganyihiin Xildhibaanadu.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo ka hadlay mooshinka laga gudbiyey ayaa si weyn uga soo horjeedtay.,waxaana uu sheegay in uu yahay mid dib-u-dhac u keenaya wadanka.
Mooshinka ayaa la sheegay in uu socday lix bilood ,waxaana xildhibaanada soo gudbiyey ku eedeeyeen Madaxweynaha Soomaaliya mid si weyn ugu xadgudbay awoodiisa dastuuriga ah isla markaana faraha la galay shaqooyin uusan lahayn.